Ị nwere ike inyere m aka ịchịkwa nchọpụta Amazon na onye na-ere ahịa dị elu na isiokwu nhọrọ?
O di nwute, enweghi ntuziaka na-emeri emeri, ma ọ bụ atụmatụ ọ bụla kachasị mma iji nwee mmeri ogologo oge na ndepụta ngwaahịa gị nke gosiri na ịchọta Amazon dị ka ndị na-ere ahịa. Ihe bụ na e nwere ọtụtụ akụkụ dịgasị iche iche nke ecommerce ịga nke ọma n'ebe ahụ, dịka ọmụmaatụ, dị ka nchịkọta na nyochacha ego, mbupu na nzaghachi nzaghachi. Ọ bụghị ịkọ nkọ, mgbasa ozi, ụtụ isi, yana ndị ọzọ ndị ọzọ na-ejikarị arụ ọrụ-ma ọ bụ ma eleghị anya ọ bụ oge na-eri oge.
Ebee Ka Ịchọta Ndazi Ziri Ezi?
Ya mere, ka anyị chee ya ihu - ị nweghị ike ijikwa ya naanị. N'ezie, ọ bụ maka ngwaahịa na-enweta ọkwa ogo dị elu na Amazon search onye ọ bụla na-ere ahịa nwere maka ihe mgbaru ọsọ bụ isi n'ebe ahụ - malthaner laufenn. Ma olee otu esi enweta ohere nke asọmpi na-ebute ụzọ n'ọdụ ahịa ndị ahụ n'Ịntanet? N'ụzọ dị mwute, e nwere ọtụtụ ngwá ọrụ bara uru na ntanetị dị n'ịntanetị dị ma ọ bụ na ntinye oghere, ma ọ bụ site na nkwụnye ụgwọ zuru oke na ndebanye aha ogologo oge. Ka o sina dị, e nwere ọtụtụ ọnụọgụ dị iche iche metụtara ihe ahụ. Ọ na-agbanwe ọrụ ahụ ịhọrọ ihe ngwọta kachasị mma maka nsogbu siri ike. Na ebe a bụ kpọmkwem mgbe m ga-egosi gị ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị elu m nwere na ndị enyemaka ọ bụla a pụrụ ịdabere na ya m na-eji akụkọ nke aka m na Amazon chọọ dịka onye na-ere ahịa mgbe niile na-agba ọsọ n'ihu ndị ọkaibe m kachasị mma. Ya mere, n'okpuru ebe a, m ga-egosi gị ngwá ọrụ dị mma na ndụmọdụ bara uru iji mee ka ọ dịkwuo mfe, ọ dịkarịa ala ma a bịa n'ị ire na Amazon dịka pro.
Keywords nwere ike ịbụ gị uru mgbagwoju anya
Ọrụ ọ bụla nwere ike ịkwado ahịa na Amazon na-amalite na ndepụta kachasị mma. N'ezie, ọ bụ nke mbụ ma eleghị anya ọ kachasị mkpa ịme ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịrịgo n'elu Amazon search dịka onye na-ere ahịa na nchịkọta gị ma ọ bụ ngwaahịa. Nchịkọta nke ederede ọ bụla (dị ka echiche mbụ nke SEO) na-amalite site n'inwe ọdịnaya dị mma na nchọpụta isiokwu nke ezubere iche. Echere, a ghaghị iji nkwado bara uru bara uru kwadoro gị n'otu oge ahụ. Ya mere, n'ihu ihe ọ bụla ọzọ, ana m akwado ịnwa na Google na - achọpụta ihe dị mkpa nke isiokwu ochie. Ngwá ọrụ a ga-enyere gị aka ịmatakwu ihe isiokwu na njikọta-ọdụ nke ị ga-ewere maka aha ndepụta gị na nkọwa ngwaahịa.
Na ebe a anyị na-emesị na-ruo n'ókè. M na-ekwu ozugbo ị nwetara nnukwu foto nke mkpokọta ndị nwere ọnụ ọgụgụ gị nwere ike inweta mmeri, ọ bụ oge iji chọpụta ihe ndị dị mkpirikpi nke isiokwu gị nke ndị iro kachasị mma - ma jiri mgbagha a na-asọmpi maka uru gị. Iji kpuchie elu-eme isiokwu ohere, M nwere ike ikwu na ịhọrọ otu n'ime ndị a abụọ na-egbu ngwá ọrụ - tụlee na-enye ma ma MerchantKeywords, ma ọ bụ KeywordInspector - M hụrụ ha ma kemgwucha nyere aka ederede njikarịcha na site n'ezie na-ere. Ka m kwuo ya ọzọ - ọ bụ naanị ihe ị họọrọ. Karịsịa n'ihi na ha nwere nnukwu ọdụ data n'ụwa niile ngwá ọrụ ndị a nwere ike ịnye gị ngwa ngwa ugbu a isiokwu ndị na-ewu ewu na ịchọpụta okwu nke ndị na-ere ahịa na-azụ ahịa na Amazon. N'otu oge ahụ, MerchantKeywords na KeywordInspector nwere ike inye gị ike nghọta dị oke mkpa na aro ndị bara uru - weghaara ma weta ya ọnụ site na ndị iro gị kacha nso. Ọ bụ ya! Mee ka ọgụgụ isi na-eme ihe niile dị arọ - ma na emeela ya.